Neymar oo la ogaaday kooxda uu ku biirayo haddii uu u soo dhaqaaqo Premier League….(Ma ahan Man United) – Gool FM
Neymar oo la ogaaday kooxda uu ku biirayo haddii uu u soo dhaqaaqo Premier League….(Ma ahan Man United)
Byare September 2, 2018
(Europe) 02 Sab 2018. Warsidha Express ayaa sheegaya in Neymar uu door bidayo inuu u dhaqaaqo Chelsea ama Arsenal haddii uuba imaanayo Premier League isla markaana uusan Maanka ku heyn kooxaha Manchester ka dhisan ee United iyo City.
Neymar ayaa rajo iyo xiiso galiyay taageerayaasha Man City suuqii xagaaga markii uu dib u soo celiyay rabitaankiisa ku aadan inuu ka hoos shaqeeyo Pep Guardiola.
Laakiin uma badna in wiilka reer Brazil uu ka soo tago Paris isla markaana uu yimaado Manchester waayo wuxuu aad u jecel yahay magaalada London.
Express Sport ayaa fahansan in 25-jirka uu saaxiibadiisa u sheegay inuu door bidayo inuu u soo dhaqaaqo Chelsea ama Arsenal halkii uu aadi lahaa United ama City haddii uuba imaanayo Premier League.
“Neymar wuxuu jecel yahay England wuxuuna inta badan Jecel yahay London. Wuxuu halkaa joogay saddex ama afar jeer 12-kii bilood ee ugu dambeeyay, “, Ilo wareed ku dhow Neymar ayaa sidaa u sheegay Express.
“Wuxuu markasta ka hadlaa wax ku saabsan London.
“Markii ugu dambeysay dhowr jeer ayuu I soo wacay isagoo iga baryaya inaan anigana imaado London maxaa yeelay aad ayuu u jecel yahay London.
“Wuxuu markasta dhahaa ‘meeshan waa Cajiib, meeshan waa Cajiib. Wuu jecel yahay London.”.
Taageerayaasha Manchester United oo ka horyimid Ed Woodward una sheegay inuu ........!! +SAWIRRO
Lopetegui oo dalbaday saxiixa xidig muhiim ah si uu kaga taqaluso mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan Real Madrid